Raveloaritiana Mamisoa · Janoary 2015 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Janoary, 2015
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Janoary, 2015
Mediam-bahoaka 20 Janoary 2015
Nanatontosa lasin'ny Tanora Mpikatroka tao Bishkek ny tetikasa nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices mba hiresaka momba ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, ary koa niresaka momba ny lohahevitra mahakasika ny VIH/SIDA .
Mpanakanto Japoney Nanao Volombavan'i Hitler Tamin'ny Fanambarana Politikan'ny Taombaovao
Azia Atsinanana 07 Janoary 2015
Inona no antony nanaovan'i Keisuke Kuwata ny volombavan'i Hitler nandritra ny fampisehoany? Tsy nolazainy ny antony, saingy mihevitra ny sasany fa natao hitsikerana ny Praiminisitra Shinzo Abe izany .
Fanoherana Tetikasa Shinoa Fitrandrahana Varahina Nahafatesana Iray sy Naharatràna Maro Tao Myanmar
Azia Atsinanana 06 Janoary 2015
Namoy ny ainy ilay ramatoa 56 taona mpamboly tamin'ny fifandonana nandritra ny fihetsiketseham-panoherana ny tetikasa fitrandrahana mampifanditra tao Myanmar, voalaza fa maty voatifitry ny polisy izy.
Fefy Vy Iadiana Amin'ny Tsy Manan-kialofana Ao an-Tanànan'i Angoulême
Eoropa Andrefana 02 Janoary 2015
Ny fety tao an-tanànan'i Angoulême tamin'ity taona ity dia nandray fepetra manohitra ireo olona tsy manan-kialofana. Niparitaka ny tsy fankasitrahana, haharitra ve izany?